ကိုယျ့အသကျအိုးအိမျစညျးစိမျတှေ လုံ ခွုံရေးအတှကျ ကိုယျတိုငျကာကှယျနေ ရမယျလို့ဘဝမှာဘယျတုနျးကမှမတှေး ထားခဲ့မိဘူးဆိုတဲ့ မငျးညီ - PS Myanmar
ဒါရိုကျတာ၊သရုပျဆောငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ မငျးညီကတော့ အနုပညာလောကမှာရပျတညျနဆေဲဖွဈပွီး ပရိသတျတှရေဲ့အားပေးခဈြခငျမှုတှကေိုလညျး ရရှိထားတာဖွဈပါတယျနျော။
မငျးညီက သမီးနှဈယောကျ၊သားတဈယောကျရဲ့ဖခငျဖွဈပွီး သူ့ရဲ့မိသားစုလေးကိုလညျး အမွဲပြျောရှငျအောငျထားပေးတဲ့ အိမျထောငျဦးစီးကောငျးတဈယောကျဖွဈပါတယျ။မငျးညီရဲ့မိသားစုဘဝလေးကတော့ သာယာအေးခမျြးမှုအပွညျ့ရှိပွီး ကလေးတှကေလညျးလိမ်မာရေးခွားရှိကွပါတယျနျော။
မငျးညီကတော့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောဆိုတတျပမေယျ့ စိတျသဘောထားပွညျ့ဝလို့ လူခဈြလူခငျပေါမြားနတောပဲဖွဈပါတယျ။သူနထေိုငျရာ ရပျကှကျမှာဆိုရငျလညျး လူအမြားနဲ့လိုကျလြောညီထှဆေကျဆံတတျလို့ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးလညျးကောငျးမှနျပါတယျနျော။
မငျးညီက လကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့အခွအေနမှောဆိုရငျလညျးပွညျသူလူထုဘကျကနရေပျတညျပွီး ကိုယျတတျနိုငျတဲ့ဘကျကနေ အားကွိုးမာနျတကျပါဝငျလှုပျရှားနတောဖွဈပါတယျ။
အခုဆိုရငျလညျး မငျးညီက ရပျကှကျသူ၊ရပျကှကျသားတှနေဲ့အတူ လမျးထိပျမှာ ဝါးကပျတှနေဲ့ကာနတောဖွဈပါတယျ။မငျးညီကတော့“ကိုယျ့အသကျအိုးအိမျစညျးစိမျ လုံခွုံ ရေး အတှကျ……ကိုယျ့လုပျစာထဲက..အခကွေးငှအေဆုံးရှုံးခံပွီး…ကာကှယျစောငျ့ရှောကျဖို့…လခပေးထားတာ….
သူတို့က…မကာကှယျတဲ့အပွငျ….ရနျရှာမှာစိုးလို့….ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ…ကာကှယျနကွေရတဲ့…ဘဝ..ဘယျတုနျးကမှ…မတှေးထားခဲ့မိဘူး…မငျးညီ (ရငျနှငျ့ရငျးသညျ)”ဆိုပွီးပုံရိပျတှနေဲ့အတူ ရေးသားမြှဝလောတာဖွဈပါတယျနျော။
Source&Photo Credit:Min Nyi’s Facebook Account
ဒါရိုက်တာ၊သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မင်းညီကတော့ အနုပညာလောကမှာရပ်တည်နေဆဲဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကိုလည်း ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်။
မင်းညီက သမီးနှစ်ယောက်၊သားတစ်ယောက်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့မိသားစုလေးကိုလည်း အမြဲပျော်ရွှင်အောင်ထားပေးတဲ့ အိမ်ထောင်ဦးစီးကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မင်းညီရဲ့မိသားစုဘဝလေးကတော့ သာယာအေးချမ်းမှုအပြည့်ရှိပြီး ကလေးတွေကလည်းလိမ္မာရေးခြားရှိကြပါတယ်နော်။
မင်းညီကတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုတတ်ပေမယ့် စိတ်သဘောထားပြည့်ဝလို့ လူချစ်လူခင်ပေါများနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူနေထိုင်ရာ ရပ်ကွက်မှာဆိုရင်လည်း လူအများနဲ့လိုက်လျောညီထွေဆက်ဆံတတ်လို့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးလည်းကောင်းမွန်ပါတယ်နော်။
မင်းညီက လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်လည်းပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီး ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ အားကြိုးမာန်တက်ပါဝင်လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင်လည်း မင်းညီက ရပ်ကွက်သူ၊ရပ်ကွက်သားတွေနဲ့အတူ လမ်းထိပ်မှာ ဝါးကပ်တွေနဲ့ကာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းညီကတော့“ကိုယ့်အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ် လုံခြုံ ရေး အတွက်……ကိုယ့်လုပ်စာထဲက..အခကြေးငွေအဆုံးရှုံးခံပြီး…ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့…လခပေးထားတာ….
သူတို့က…မကာကွယ်တဲ့အပြင်….ရန်ရှာမှာစိုးလို့….ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်…ကာကွယ်နေကြရတဲ့…ဘဝ..ဘယ်တုန်းကမှ…မတွေးထားခဲ့မိဘူး…မင်းညီ (ရင်နှင့်ရင်းသည်)”ဆိုပြီးပုံရိပ်တွေနဲ့အတူ ရေးသားမျှဝေလာတာဖြစ်ပါတယ်နော်။